The Rohingya News Bank : Antonio Guterres
Police advance towards protesters demonstrating against the military coup in Yangon on February 22, 2021
Labels: 2021, Antonio Guterres, e, Myanmar, News, repression, UN Chief
ရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံ
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံနေသည့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး။ (မတ် ၇၊ ၂၀၂၀။ ဓာတ်ပုံ - Antonio Guterres' Twitter)
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အင်းဒင်ကျေးရွာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ၁၀ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှု သတင်းထုတ်ဖော် ရေး သားခဲ့ကြတဲ့ ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2020, Antonio Guterres, mm, ဗွီအိုအေ, ရိုက်တာသတင်းထောက်, တွေ့ဆုံ
ရခိုင်စစ်ပွဲကိစ္စ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြောဆိုခြင်းမရှိ၊ ရိုဟင်ဂျာနေရပ်ပြန်ရေး တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အာဆီယံ အစည်း အဝေး မှာပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူတွေ ဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ ပြန်လာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ၁၀ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီရို ဂူတာရပ်စ်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, DASSK, DVB, mm, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, နေရပ်ပြန်ရေး
UN calls on Myanmar to end Rakhine crisis
AP 04 Nov 2019
United Nations Secretary-General Antonio Guterres listens toaquestion duringanews conference at the Association of Southeast Asian Nations summit in Nonthaburi, Thailand, on Sunday. Photo - AP
UN Secretary-General Antonio Guterres expressed concern Sunday about the plight of the 730,000 Muslim refugees from northern Rakhine State, calling on Myanmar’s government to take responsibility by dealing with the “root causes” of their flight and working toward their safe repatriation.
Labels: 2019, Antonio Guterres, en, Myanmar, News, Rakhine Crisis
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအတွက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း အာဆီယံဘက်က အထူး လုပ်ငန်းတခု ဖွဲ့စည်းဖို့ ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres က ပြောဆိုလိုက်ပါ တယ်။ အာဆီယံရဲ့ ပိုပြီး ဆောင်ရွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဘက်က အပြည့်အ၀ ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ပြဿနာရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့က မြန်မာရဲ့တာဝန် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ထောက်ပြပါတယ်။ ဒီအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကလည်း တုံ့ပြန်သွား ပါ တယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, DASSK, mm, UN, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာအရေးဖြေရှင်းဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မေတ္တာရပ်ခံ
၀၃ နိုဝင်္ဘာ ၂၀၁၉
၃၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ)ထိပ်သီး အစည်း အဝေးနဲ့ ဆက်စပ်အစည်း အဝေးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေ အပြင် တခြား ဆက်စပ် အစည်း အဝေးတွေ ဖြစ်တဲ့ အာဆီ ယံ-ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ-အမေရိကန် အစည်းအဝေးတွေကိုလည်း ကျင်းပပါတယ်။ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လည်း တက် ရောက်နေပါတယ်။
အာဆီယံနဲ့ ဆက်စပ် အစည်းအဝေးကို လာရောက်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတား ရက်စ်က ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တိုက်ရိုက် မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါ တယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, DASSK, mm, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း, မေတ္တာရပ်ခံ
ရိုဟင်ဂျာအရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးစိုးရိမ်ချက် အာဆီယံ အစည်းအဝေးတွင်း ဖော်ပြ
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ မွတ်စလင်ဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူ့အနေနဲ့ အင်မတန် စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres က ပြောပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်းခံအကြောင်းတရားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ သူတို့တွေ လုံလုံခြုံခြုံ နေရပ်ရင်းပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်း ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါ တယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, ASEAN, mm, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း
Speaking atasummit of Southeast Asian leaders in Bangkok -- with Myanmar's de facto head Suu Kyi in the room -- Antonio Guterres said he remains "deeply concerned" about the plight of the Rohingya.
Labels: 2019, Antonio Guterres, en, Franch24, News, Rohingya Retrun, UN
Labels: 2019, Al Jazeera, Antonio Guterres, ASEAN, en, New, News, Rohingya Crisis, UN, Video
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၃၅ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ ဆက်စပ် အစည်းအဝေးတွေကို တက်ရောက်လာတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Gueterrus က မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေသတွင်း ပြဿနာတရပ်ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးမှာ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဌာနေပြန်နိုင်ရေးနဲ့အတူ ပြည်တွင်း ပြန်လည်သွေးစည်းရေးကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, ASEAN, mm, သတင်း
Momen: UN wants Rohingya solution soon BSS
File photo: Foreign Minister Dr AK Abdul Momen meets with UN chief Antonio Guterres in New York on Tuesday, July 16, 2019 PID
'You (the UN) should work more in Rakhine rather than in Bangladesh. I conveyed this (to Guterres),' he said
Foreign Minister Dr AK Abdul Momen has said the United Nations (UN) is putting all efforts for resolving the Rohingya crisis in the shortest possible time.
Labels: 2019, Antonio Guterres, Bangladesh, Dr AK Abdul Momen, en, News, Rohingya, UN
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့တွေ တောင်းဆို
ကော့ဇ်ဘဇားဒေသ ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ် AFP Photo
မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres အပါအဝင် ထိပ်တန်း အရာ ရှိကြီးတွေ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့ အာဆီယံအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ ERAT ရဲ့ အစီရင်ခံစာက မြန်မာအစိုးရရဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို အားပေးရာ ရောက်တဲ့အတွက် ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 1978, 2019, Antonio Guterres, mm, Nay San Lwin, RFA Burmese, ကုလသမဂ္ဂက, သတင်း, အတွင်းရေးမှူးချုပ်, ဦးထွန်းခင်
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေး ကုလသမဂ္ဂအားနည်းချက် ရှိခဲ့ကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်လက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေရဲ့ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်တွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မွတ်စလင်များအရေး ဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂ အ တွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတားရက်စ်က လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒီအစီအရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်တွေ ကို အကောင်ထည်ဖော်ခြင်း ရှိ မရှိ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
Labels: 2019, Antonio Guterres, mm, ကုလသမဂ္ဂက, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အတွင်းရေးမှူးချုပ်
မြောက်ဦးဒေသခံတွေ လုံခြုံရေး ပြည်ပရောက်ရခိုင် တွေစိုးရိမ်
မြောက်ဦးမြို့တွင်း ပစ်ခတ်မှုက တဖက်သတ် မဟုတ်ဘဲ လက်နက်ကိုင်တပ် AA ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို တုံ့ပြန် တာလို့ မြန်မာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ပြောဆိုပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ပစ်ခတ်မှုတွေ ခပ်စိပ်စိပ် ဖြစ်လာတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေ အားလုံး တာဝန်ယူ တာဝန်ခံကြဖို့ ကုလသ မဂ္ဂက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကျေလည်မှုတွေကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြဖို့လည်း ပြည်ပ ရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, Antonio Guterres, mm, ကုလသမဂ္ဂက, ရခိုင်, လုံခြုံရေး, မြောက်ဦးမြို့
Nine UN countries call for meeting on Rohingya crisis.
NEW YORK: The United States, France, Britain and six other countries on the United Nations Security Council have called forameeting on Myanmar that is expected to face opposition from China, diplomats said.
Labels: 2019, Antonio Guterres, China, en, Myanmar, Northern Rakhine, Refugee, Rohingya, Rohingya Crisis, Swiss Diplomat, The Star, UN, UNSC